Antananarivo Renivohitra na CUA amin’izao fahasahiranana anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus izao. « Raha izy no teo, hafa no nitantanany anay. Voajeriny sy notohanany avokoa ireo mpiasa an-tsehatra mpamàfa làlana na ara-pitaovana na ara-tsakafo, mba tsy ho marefo », hoy i Noro. « Hafa mihitsy tamin’ny fitondrany. Nozarainy « prime » foana ny mpiasa, isaky ny fety ary tsy mba nanambany na nanandefo ny mpiara-miasa izany izy satria mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra », hoy i Samy nanamafy. Zary nofinofinay mpiasa ao sisa izany, hoy izy ireo.